JD Union Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama daholo, mitady hampiasa vola ve ianao ary te hahazo tombony amin'izany? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe JD Union Apk. Izy io dia manolotra ny fomba tsara indrindra hahazoana vola amin'ny fampiasam-bola tsotra.
Araka ny fantatrao, noho ny toe-trangan'ny areti-mandringana dia voa mafy ara-bola ny tsirairay. Olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao no very asa sy loharanom-bola lehibe. Ka noho izany dia sehatra samihafa no omena ny olona hamaly ny filany, fa sehatra vonjimaika fotsiny ireo rehetra ireo.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity ho anao rehetra, izay ahafahanao mampitombo ny loharano farany. Fampiharana tsotra izy io hiteraka fanohanana ara-bola. Mila fanombohana fotsiny ianao vao manomboka mamorona vola be. Te hahay mitady vola ve ianao?
Raha eny dia mijanona miaraka aminay fotsiny. Izahay dia hizara ity rindranasa ity, izay ahazoanao mahazo vola mafy mandritra ny fotoana ipetrahanao ao an-trano. Hizara ny antsipiriany rehetra momba izany izahay. Azonao atao ihany koa ny mifandray aminay raha manana fangatahana momba izany ianao.
Topimaso momba ny JD Union Apk
Izy io dia rindrambaiko marketing Android, izay ahazoan'ny olona vola. Fampiharana sinoa izy io, izay natao manokana ho an'ny vahoaka indoneziana. Noho izany, manome fiteny maro ho an'ny mpampiasa izy amin'ny fifandraisana serasera.
Izy io dia manolotra komisiona ho an'ny mpikambana amin'ny fivarotana vokatra. Ny JD Union App dia manome ny tahan'ny komisiona samihafa ho an'ny mpikambana araka ny fampiasam-bola. Raha te-hahazo tahan'ny vaomiera ambony ianao dia tsy maintsy mampiasa vola be amin'izy ireo.
JDUnion dia manolotra toe-javatra mandresy lahatra ho an'ny mpikambana. Raha mampiasa vola be ny mpikambana dia afaka mahazo vola be koa izy ireo, sns. ny Mahazo App manome fetra amin'ny fampiasam-bola, izay manomboka amin'ny IDR 20 arivo. Tsy maintsy manolotra 20 arivo mahery ny mpikambana vao mahazo komisiona 0.3%.
Raha mampiasa vola mihoatra ny 100 tapitrisa ianao, dia hampiakarana ho 0.4% ny tahan'ny komisiona. Ny fampiasam-bola dia tsy midika hoe tsy maintsy mandoa azy ireo ianao ary very. Azonao atao ihany koa ny manaisotra ny vola amin'ny fotoana rehetra tianao hampiatoana ny fifandraisanao amin'ny JD Union 888.
Mila mandray anjara amin'ny andraikitry ny mpivarotra antoko fahatelo fotsiny ianao ary mivarotra vokatra amin'ny alàlan'ny fivarotana sy fivarotana an-tserasera. Fomba tsara hampitomboana vola izany rehefa mijanona ao an-trano. Misy endri-javatra maro hafa, izay azonao jerena ao amin'ny JD Union 888 Apk.
anarana JD Union
Anaran'ny fonosana com.chainz.jdlm
Araka ny nolazainay ny sasantsasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa izay azonao jerena. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Ao amin'ny lisitra etsy ambany no hizarantsika ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao rehetra.
Fomba tsara indrindra hahazoana vola
Manana fampiharana mitovy amin'izany ho anao izahay, manantena fa tianao koa izany.
Avy amin'ny traikefa manokana eny, azo antoka ny fampiasana ny JD Union Penipuan. Misy ny vaovao momba ny fandraràna ny kaonty, fa ireo kaonty rehetra ireo dia nandika ny fitsipiky ity fampiharana ity. Noho izany dia voarara ireo kaonty rehetra ireo. Saingy tsy afaka manome karazana antoka momba ny fiarovana an'ity app ity izahay.
Tsy misy izany ao amin'ny Google Play Store, fa aza manahy. Izahay hizara an'ity rindranasa ity miaraka aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
JD Union Apk no fomba tsara indrindra ahazoana vola mafy eo noho eo. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazoa fidirana maimaim-poana hahazoana vola.
Sokajy Apps, Business Tags Mahazo App, JD Union, JD Union Apk, JD Union App Post Fikarohana
Scarz Apk Download ho an'ny Android [sarimihetsika maimaim-poana]